Ciidammada Ammaanka oo howlgal ka Sameeyay Jowhar – Radio Muqdisho
Ciidammada Ammaanka oo howlgal ka Sameeyay Jowhar
Howlgal lagu xaqiijinayay amaanka magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeelaha Dhexe ayaa waxaa si wadajir ah u sameynaayay Ciidamada Boliiska, Nabad sugida iyo Militirga oo kaashanaya kuwa AMISOM, waxaana howlgalka laga fuliyay qaar kamid ah xaafdaha degmada Jowhar.
Gudoomiye ku xigeenka maamulka gobolka Shabeelaha Dhexe Axmed Meyre Makaraan ayaa saxaafadda u sheegay in u jeedada howlgalkan ay tahay in la xaqiijiyo amaanka guud ahaan gobolka si looga hortago falalka amaanka lidiga ku ah oo ay maleegayaan kooxda Nabad diidka ah ee UGUS.
“Howlgalkan ayaa looga gol lahaa in ka xaqiijiyo amaanka waxaana u mahadcelinayaa shacabka ku nool halkan sida ay ula shaqeeyeen ciidanaka amniga” ayuu yiri gudoomiye Amxed Meyre.
Sidoo kale waxaa howlgalka maanta dhankiisa ka hadlay Taliyaha Nabad sugid ee gobolka C/wali Ibraahim waxaana uu sheegay in howlgalada noocaan ah ay joogteyn doonaan si loo sugo amaanka iyo nabadgeliyada guuud ahaan gobolka Shabeelaha Dhexe.
Ciidanka ayaa xaafadaha qaar guri guri u baarayay iyadoo intii howlgalka uu socday la soo qab qabtay tiro oo lagu tuhmay in ay ka tirsanaayeen kooxaha nabad diid aha hase yeeshee gudoomiye Meyre ayaa tilmaamay in ay baaritaano ku samyen doonaan dadkaasi.
Wasaaradda Xanaanada Xoolaha oo Muqdisho ku qabatay kulan looga hadlayay ilaalinta deegaanka